Buugga " Sidee ku noqon kartaa Arday Guuleysta?" oo Cadaado lagu soo bandhigay (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Buugga ” Sidee ku noqon kartaa Arday Guuleysta?” oo Cadaado lagu soo bandhigay (Sawirro)
December 5, 2017 December 5, 2017 admin227
Buugga ” Sidee ku noqon kartaa Arday Guuleysta?” ayaa galabta lagu soo bandhigay Hotelka Central Magaalada Cadaado, Bandhiggan ayaa waxaa soo qabanqaabisay Madasha #Heego_Forum oo ay aasaaseen dhalinyaro ku nool Magaalada Cadaado.
Buuggan maanta lasoo bandhigay ayaa waxaa qoray nin dhalinyaro ah lagu magacaabo Galad Maxamed Barre, kaas oo dugsiga sare uga baxay Magaalada Cadaado. Buuggan ayaa hogatusaaleynaya ardayda Soomaaliyeed sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Waxbarashada. Madasha ayaa waxaa kasoo qeybgalay Qeybaha Bulshada.
Aqoonyahan Cilmi Nuurre wehliye ayaa goobta ka jeediyey hadal dhiirigalin ah, isagoo dhalinta kula dardaarmay in badiyaan aqriska iyo qorista buugta. Sidoo kale Dad kasoo qeyb galay oo u badnaa Dhalinyaro hadda waxbarashada ku jirta ayaa aad ugu riyaaqay bandhigga.
Nabadoon Caan ah oo xalay Muqdisho lagu Dilay
Taliyaha NISA oo Shaqajoojin ku sameeyey Taliye ku xigeenadiisa (Akhriso)
Sawirro: Wararkii ugu dambeyey Qaraxa Hotel Dayax
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle oo la magacaabay
August 29, 2017 August 29, 2017 Cali Yare